Fitsangatsanganana any amin'ny 4 amin'ireo tanàna manan-danja indrindra any Brezila | Vaovao momba ny dia
Fitsangatsanganana any amin'ny 4 amin'ireo tanàna manan-danja indrindra any Brezila
Susana Garcia | | America, Brasil
I Brazil dia eo an-tsain'ilay Lalao Olaimpika, ary tsy isalasalana fa toerana fialan-tsasatra tsara nandritra ny taona maro. Marina fa mijanona amin'ny dia mankany Rio de Janeiro daholo isika rehetra, tsy mieritreritra ny fahafaha-manao zavatra maro hafa, satria any Brezila dia misy tanàna mahaliana maro hitsidika izay miandry antsika.
Androany dia hanao fitsidihana fohy isika tanàna efatra lehibe indrindra eto Brezila mitsangatsangana. Avy amin'ny fanta-daza amin'ny olon-kafa izay tsy dia mpizaha tany loatra fa manana ny hatsarany koa. Manomboka amin'ny tanàna maoderina izay nitombo be ka hatrany amin'ny hafa izay manana faritra manan-tantara manana lanjany lehibe izay misy mahita betsaka. Ankoatra ny Lalao Olaimpika, any Brezila dia manana toeran-dàlana tsy mampino isika, miaraka amin'ireo habaka voajanahary sarobidy sy tanàna be vava.
4 Salvador avy any Bahia
Manomboka, mazava ho azy, ny tanàna olympika sy ny toerana tena tian'ny mpizahatany rehefa mieritreritra an'i Brezila, Rio de Janeiro. Tsy isalasalana fa maro ny zavatra azo jerena sy atao ao amin'ny tanàna mahaliana indrindra, miaraka amin'ireo morontsiraka mahatalanjona Copacabana sy Ipanema. Ao amin'izy ireo, ny fialamboly dia efa azo antoka, satria misy hetsika maro manodidina azy, miaraka amin'ny dia an-tongotra tsara hankafizanao ny toe-tsaina tsy miraharaha ao an-tanàna.
Fitsidihana an'i Corcovado sy Kristy Mpanavotra Adidy tanteraka izany, ary avy eo koa dia hanana fomba fijery mahavariana momba ny tanàna Rio de Janeiro amin'ny lafiny rehetra isika. Ny fiakarana mankany 'Pan de Azúcar', tendrombohitra iray any Guanabara Bay, dia malaza ihany koa, na dia milamina aza, satria misy funicular haka antsika. Raha vao ao an-tanàna ianao dia tsy maintsy mandeha mamaky ny manodidina maoderina any Santa Teresa, izay ahitanao ireo toerana lamaody indrindra sy ny atmosfera an-tanàn-dehibe sy maoderina indrindra. Ary tsy tokony halahelo ny fitsidihanao ny kianja malaza Maracana ianao, satria ny baolina kitra eto amin'ity firenena ity dia ao anatin'ny ADN-ny.
Sao Paulo dia tanàna maoderina ahafahantsika mahita trano fanaovana tranobe maro ary fomba fiaina tena an-tanàn-dehibe. Fa amin'ity tanàna ity dia misy fialamboly betsaka ihany koa. Fitsangatsanganana amin'ny Paulista Avenue Izy io dia mety indrindra ho an'ireo izay tia miantsena, satria misy toeram-pialamboly maro sy fivarotana tsara tarehy handaniana ny tolakandro. Ho fanampin'izany, eto amin'ity faritra ity dia ny Museum of Art, noho izany dia mora mitsidika roa izahay, mankafy miantsena ary kolontsaina kely. Tranombakoka iray hafa mety mahaliana ny Football Museum, ho an'ireo tia an'ity fanatanjahantena ity.
Raha te hanana fomba fijery lehibe momba ny tanàna isika dia afaka miakatra amin'ny Tilikambon'i Banespa maka sary mahatalanjona. Etsy ankilany, ny gourmets dia te-hidina amin'ny tsenan'ny tanàna hanandrana ny vokatra eo an-toerana sy hanandrana lovia ao amin'ireo toerana ao anatiny. Fialam-boly tsara ihany koa ny mamaky ny Ibirapuera Park, ilay havokavoka maitso lehibe ao an-tanàna, toerana milamina misy fialamboly sy hetsika ara-kolontsaina maro.
Brasilia dia tanàna iray tsy manam-paharoa, ny lazany dia manodidina ny endrik'ilay mpanao mari-trano Neimeyer, izay nandray anjara tamin'ny famoronana tanàna maoderina miaraka amina endrika tsy mampino. ny Axis lehibe an'ny tanàna Izany dia lova navelan'ity mpanao mari-trano ity ary toerana ahitana ny toerana tena mahaliana indrindra, ary efa izy no World Heritage Site hatramin'ny 1987. Amin'ity axis ity no ahitantsika ny Plaza sy ny Buriti Park miaraka amin'ny fahatsiarovana JK sy ny Fahatsiarovana ny Indizeny Vahoaka. Hanohy amin'ny alàlan'ny TV Tower izahay, mba hanana fomba fijery kanto momba ny tanàna. Avy eo isika dia afaka mahita ny Katedraly sy ny tranombakoka nasionaly, ary koa ireo tranon'ny minisitra sy ny Plaza de los Tres Poderes. Tanàna lavorary ho an'ireo tia maritrano sy maoderina.
Salvador avy any Bahia
Avy amin'ny tanàna maoderina sy mpamorona toa an'i Brasilia, miroso amin'ny iray amin'ireo tanàna manan-tantara indrindra eto amin'ity firenena ity isika, Salvador de Bahia. Izy no renivohitr'i Brezila voalohany, ary noho izany ny tanànany taloha dia World Heritage Site. Tao amin'ity tanàna ity dia nisy fifangaroana kolontsaina tsy mampino, ary asitrika ao anaty tanana haolo izay hahagaga antsika ny hamaroan'ny loko ao an-tranony, mamorona sary manokana raha oharina amin'ireo tanàna hafa, izay azontsika fantarina tsara. Ny dia mamaky ny faritra afovoany manan-tantara dia tsy maintsy, miaraka amin'ny toerana toa ny Kianja Monisipaly, Pelourinho na ny Largo de Sao Francisco. Tsy hijanona amin'ny fakana sary an'ireo trano miloko izahay.
Saingy ity tanàna ity dia mihoatra lavitra noho ny faritra manan-tantara. Tsy isalasalana fa iray amin'ireo manintona lehibe an'i Salvador de Bahía ireo kilometatra dimampolo kilaometatra misy azy tora-pasika ary ny morontsiraka, hankafizanao fialan-tsasatra mahafinaritra. Ireto faritra feno fasika ireto dia manana velaran-tany mahafinaritra miaraka amin'ny hazo rofia, misy rano tropikaly sy kristaly ary karazana fialamboly, satria maro ny morontsiraka akaikin'ny tanàna. Puerto de la Barra dia iray amin'ireo soso-kevitra indrindra ho an'ireo izay te-hahita ireo faritra feno fasika any an-toerana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Fitsangatsanganana any amin'ny 4 amin'ireo tanàna manan-danja indrindra any Brezila